Artha Sansar News - हाम्रो विकास बैंकले माग्यो १ दर्जन कर्मचारी
बुधबार, १२ बैशाख २०७५, ०२ : ४५
हाम्रो विकास बैंकले माग्यो १ दर्जन कर्मचारी
सोमबार, २५ पुष २०७३
काठमाडौँ – नुवाकोटमा केन्द्रीय कार्यालय रहेको हाम्रो विकास बैंक लिमिटेडले एक दर्जन भन्दाबढी कर्मचारीका लागि आवेदन आवेदन आह्वान गरेको छ । बैंकले ४ वर्षको अनुभवसहित व्यवस्थापन संकायमा मास्टर्स वा सीए उतीर्ण गरेका एक जना डेपुटी जेनेरल मेनेजर मागेको छ । उक्त पदका लागि ४५ वर्षको उमेर ननाघेको हुनुपर्नेछ ।
यस्तै बैंकले एकजना आईटी मेनेजरका लागि पनि दरखास्त आह्वान गरेको छ । उक्त पदका लागि आइटी विषयमा स्नातक उतीर्ण गरी कम्तीमा ४ वर्षको अनुभव भई ४५ वर्ष ननाघेको हुनुपर्नेछ ।
त्यस्तैगरी व्यवस्थापकीय तह अपरेसनका लागि व्यवस्थापन वा अर्थसास्त्रको संकायमा मास्टर्स वा सीए उतीर्ण गरेको एकजना कर्मचारीको लागि निवेदन खुल्ला गरेको छ । उक्त पदका लागि कम्तीमा ४ वर्ष बैंक तथा वित्तीय संस्थामा अफिसर लेभलमा रहेर काम गरेको र उमेर ४५ वर्ष ननाघेको हुनुपर्नेछ ।
यस्तैगरी व्यवस्थापन, अर्थ वा कानुन विषयमा मास्टर्स गरेको वा सीए गरेको ५ जनाको लागि व्यवस्थापन प्रशिक्षार्थीका लागि पनि आवेदन आह्वान गरेको छ । उक्त पदका लागि ३५ वर्ष ननाघेको हुनुपर्नेछ ।
यस्तै सिनियर एसिस्टेन्ट ३ जनाको लागि पनि बैंकले कर्मचारी मागेको छ । उक्त पदका लागि स्नातक उतीर्ण गरी बैंक तथा वित्तीय संस्थामा २ वर्ष काम गरेको र ३५ वर्ष ननाघेको हुनुपर्नेछ ।
यस्तैगरी एसएलसी पास गरी सवारीचालक अनुमतिपत्र भएको एकजना म्यासेन्जरको लागि पनि निवेदन खुल्ला गरेको छ । उक्त पदका लागि ४० वर्ष उमेर ननाघेको हुनुपर्नेछ ।
यस्तै बैंकले केहि प्रशिक्षार्थी एसिस्टेन्टको पनि माग गरेको छ । उक्त पदका लागि व्यवस्थापन संकायमा स्नाकोत्तर उतीर्ण गरेको र ३५ वर्ष ननाघेको हुनुपर्नेछ ।
बैंकले इच्छुक तथा योग्यता पुगेका नेपाली नागरिकलाई पुस २७ गतेभित्र आवेदन दिन भनेको छ । ईच्छुक व्यक्तिले हाम्रो विकास बैंकको इमेल ठेगाना vaccancy@hamrobank.com मा आफ्नो शैक्षिक योग्यताको प्रमाणपत्र, व्यक्तिगत विवरण र निवेदन पठाउन सक्नेछन् ।
यी विषय पढ्न छुटाउनु भयो कि ?
के हो केन्द्रीय निक्षेप प्रणाली ?
अलटिमेट हाई टेकले माग्यो ३६ जना कर्मचारी
होङ्सी शिवम् सिमेन्टमा कर्मचारीको आवश्यकता
स्वाबलम्बनमा दुई नयाँ संचालक नियुक्त
सूचिकृत कम्पनीलाई बर्गिकरण गर्न नेप्सेले माग्यो विवरण
बाल्यकालमै दुवै गोडा गुमाएर जीउनु पर्दा